October 13, 2017 सम्पादक अन्तरबार्ता, प्रवास
खगेन्द्र जिसी, एनआरएनएको उपाध्यक्षका प्रत्यासी
खगेन्द्र क्षेत्री गैरअावासीय नेपालीमाझ सुपरिचित नाम हाे। गैरअावासीय नेपाली संघ अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष क्षत्री पेशाले वकिल हुन् । अमेरिकाका पहिलाे नेपाली अटाेर्नीकाे इतिहास रचेका जीसी एनअारएनअाइसीसी कार्यसमिति सदस्य तथा नागरिकतासम्बन्धी कार्यदलको सह–अध्यक्ष हुन् । उनी नेपाल सरकारका गैरअावासीय नेपालीसम्वन्धी मानार्थ सल्लाहकार पनि रहेका छन्। उनले यही अक्टाेबर १४ देखि १७ सम्म काठमाडाैं हुन लागेकाे अाठाैं एनअारएन विश्व सम्मलेलन तथा साधारणसभामा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। यसअघि पनि साेही पदमा उम्मेद्वारी दिएर निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका क्षेत्री फेरि किन त्यही पदमा उम्मेद्वारी दिइरहेका छन् ? उनकाे उम्मेद्वारीलार्इ केन्द्रमा राखेर हामीले क्षेत्रीसँग लामाे अन्तर्वार्ता गरेका थियाैं । प्रस्तुत छ, त्यही अन्तर्वार्ताकाे केही अंश ।
तपार्इले फेरि एकपटक उपाध्यक्षमै उम्मेद्वारी दिनु भएछ। अाखिर किन फेरि उपाध्यक्षमै उम्मेद्वारी दिनु भएकाे हाे ?
मैले यसअघिकाे चुनावमा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएकाे थिएँ । निकटतम् प्रतिस्पर्धी रहे पनि विजयी हुन सकिन । मैले त्याे पराजयलार्इ स्वस्थ लाेकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका अाधारमा भएकाे पराजय ठानेकाे थिएँ । मैले जुन पृष्ठभूमी र परिस्थितिमा उम्मेद्वारी दिएकाे थिएँ, त्यसलार्इ अाधार मान्दा मैले जति मत पाएँ, त्याे मेराे लागि ठूलाे उपलव्धी थियाे । संसारभरकै एनअारएनमाझ पुगेर उहाँहरूकाे मन जित्ने प्रयास गरें, कम्तिमा अमेरिका पनि एनअारएनकाे नेतृत्वका लागि तयार छ है भन्ने खालकाे सन्देश दिएँ, त्याे मेराे लागि मात्र हैन, एनअारएन अमेरिकाकाे लागि पनि उपलव्धी भएकाे ठानेकाे छु। मैले यस बीचमा एनअारएनका लागि केही याेगदान गर्ने अवसर पनि पाएकाे छु । धेरै साथीहरूसँग सहकार्य र मित्रता बढेकाे छ । उहाँहरू सबैले यसपटक उठ्नुहाेस्, हामी सघाउँछाै भनेका छन् । त्यसैले फेरि एकपटक प्रयास गर्ने निर्णय गरेकाे हुँ।
तपार्इले यसअघि उम्मेद्वारी दिदाकाे पृष्ठभूमी र परिस्थितिकाे कुरा गर्नुभयाे । त्यसमा अहिले केही फरक अाएकाे छ र ?
अमेरिकामा रहेका सबै एनअारएन साथीहरूलार्इ थाहा छ, मैले अघिल्लाे पटक अमेरिकाज क्षेत्रकाे क्षेत्रीय संयाेजकमा उम्मेद्वारी दिने साेच बनाएकाे थिएँ। त्यस पदमा साेनामजीले पनि इच्छा राख्नु भयाे । हामी दुबैजना एउटै पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा साेनामजीले अारसी र मैले उपाध्यक्षमा चुनाव लड्दा ठीक हुन्छ भनेर साथीहरूले भने । त्यसाे गर्दा सबैकाे सहयाेग पुग्ने र चुनाव जित्न सजिलाे हुने बताइयाे । वास्तवमा त्यतिबेला मेराे एनअारएन अाइसीसीकाे उपाध्यक्षका लागि तयारी नै पुगेकाे थिएन। संसारभरका एनअारएन साथीहरूमाझ म खासै पुगेकाे पनि थिइन् । अन्तिम समयमा उम्मेद्वारी दिएकाले अाफ्नै साथीहरूसँग चुनावमा तालमेल पनि गर्न सकिएन। त्यतिबेला अाइसीसीमका एउटा लहर अाएकाे थियउाे, अाफू त्याे लहरभित्र पनि पर्न सकिएन । चुनावका लागि अावश्यक पर्ने रणनीति र चाणक्यनीतिहरू पनि बनाउन सकिएन। अझ अमेरिकाकै सबै साथीहरूलार्इ पनि मेराे उम्मेद्वारी अमेरिकाकै प्रिष्ठाकाे विषय हाे भनेर बुझाउन पनि सकिएन, सबैकाे साथ र सहयाेग पनि लिन सकिएन। यी विविध कारणले चुनावमा सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा गरे पनि जीत भने हात पार्न सकिएन। जहाँसम्म पहिला र अहिलेकाे परिस्थितिमा के फरक अाएकाे छ भन्ने कुरा हाे मैले गत चुनावकाे बेला निकै महंगाे मूल्य चुकाएर केही पाठ सिकेकाे छु । संसारभरका एनअारएन साथीहरूले पनि मेराे अावश्यकता र अाैचित्य बुझ्नुभए जस्ताे लागेकाे छ । यसबीचमा मैले अाइसीसी सदस्य र नागरिकतासम्बन्धी कार्यदलको सह–अध्यक्षका रूपमा काम गरेर अनुभव पनि बटुलेकाे छु। सरकारले पनि मेराे विशेषज्ञता, याेग्यता, अनुभव, क्षमता र समपर्णकाे सम्मान गर्दै गैरअावासीय नेपालीसम्वन्धी मानार्थ सल्लाहकारकाे जिम्मेवारी दिएर संसारभरका एनअारएनहरूकाे सेवा गर्ने माैका दिएकाे छ । अमेरिकाका साथीहरूले पनि मेराे उम्मेद्वारीलार्इ व्यक्तिगतभन्दा पनि माथि उठेर सहयाेग गर्ने बचन दिएका छन्। मलार्इ लाग्छ, प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा मेराे पक्षमा पहिलाकाे भन्दा सकारात्मक माहाैल बनेकाे छ ।
तपार्इ उठ्नैपर्ने केही वस्तुगत कारणहरू बताइदिनु हुन्छ कि ?
म नै हुनुपर्छ भन्ने म्यान्डेटरी त केही छैन तर अरू पनि मजस्तै काेही उपाध्यक्ष हुने भएकाले म नहुनुपर्ने कारण पनि मैले केही देखेकाे छैन। म मूलतः दुर्इ कारणले हुनुपर्छ भन्ने मलार्इ लाग्छ, पहिलाे नेपालकाे संविधानमा गैरअावासीय नेपाली नागरिकताकाे व्यवस्था गर्न मैले सुरूदेखि नै काम गरेकाे छु । फलतः अहिले त्याे व्यवस्था त भएकाे छ तर त्यसलार्इ कानूनतः व्यवस्थित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकि छ। त्यसका लागि मेराे जस्ताे अनुभव, विशेषज्ञता हासिल भएका मानिस पदाधिकारीमा हुँदा धेरै सहज हुन्छ। अझ म सरकारकाे तर्फबाट पनि एनअारएन सम्वन्धी सल्लाहकार भएकाले दुबैतर्फबाट एकै व्यक्ितले थप समन्वय गरेर काम गर्न सहज हुन्छ। दाेस्राे, संसारकै ठूलाे एनअारएन राष्ट्रिय समन्वय समिति हाे अमेरिका । यसले एनअारएनका लागि पर्याप्त याेगदान गरेकाे छ। तर, संस्थागत भएपछि अमेरिकाले कुनै पदाधिकारीकाे भूमिका पाएकाे छैन। अब त हाम्राे पनि त पालाे अाउनुपर्ने हाे नि। संसारभरका साथीहरूले हाम्राे त्याे याेगदानकाे कदर गर्ने भनिरहेका छन् । त्यसैले पनि मैले उम्मेद्वारी दिएकाे हुँ। तेस्राे कुरा, गत निर्वाचनमा म थाेरै मतले निकतम प्रतिस्पर्धी भएकाे हुँ। त्यतिबेलाका उपाध्यक्षमध्ये भवनजी अध्यक्षमा चुनाव लडिरहनुभएकाे छ भने कुमारजी पुनः उपाध्यक्षमै उम्मेद्वारी दिइरहनु भएकाे छ । त्यसैले उहाँहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर निकटतम प्रतिस्पर्धी भएकाे मैले पनि एनअारएनमा अाफ्नाे विशेषज्ञता प्रयाेग गरेर याेगदान दिएकाे छु। त्यसैले मैले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएर एनअारएनकाे सेवा गर्ने इच्छा राखेकाे हुँ।
तर, अमेरिकाबाटै साेनाम लामाले पनि उम्मेद्वारी घाेषणा गर्नुभएकाे छ नि ?
मैले पनि सुनेकाे छु । तर, गत निर्वाचनमा पनि मैले उहाँलार्इ अमेरिकाज क्षेत्रकाे क्षेत्रीय संयाेजकमा सघाएर अाफूले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएँ। त्यतिबेला उहाँलार्इ राेजी पद थियाे भने मेराे लागि छाडी पद थियाे । मैले अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सफलता हात पार्न सकिन। यसपटक म पुनः त्यही पदमा एकपटक प्रयास गर्छु भन्दा उहाँले उपाध्यक्षमै उम्मेद्वारी दिनुहुन्छ जस्ताे मलार्इ लागेकाे छैन। मेराे विचारमा उहाँजस्ताे एनअारएनमा लामाे याेगदान र सक्रियता भएकाे व्यक्तिले नैतिक रूपले पनि त्यसाे गर्नुहुन्छ जस्ताे लागेकाे छैन। मलार्इ विश्वास छ, मैले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिइसकेकाे अवस्थामा उहाँले त्यही पदमा उम्मेद्वारी दिनु हुने छैन। हामी अमेरिकाकै दुर्इजनाले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दियाै भने संसारभरका एनअारएनमाझ सकारात्मक सन्देश जाँदैन। एनअारएन अार्इसीसीमा हुने दुर्इ उपाध्यक्षमा हामीलार्इ नै जिताउनुस् भन्न नैतिकरूपले पनि सजिलाे हुदैन। एनअारएनकाे चुनावमा अमेरिकाकाे १८१ मत छ। जितका लागि पर्याप्त नभए पनि निर्णायक मत हाे याे।
याे मत नै एक ढिक्का भएर तपार्इकाे पक्षमा खस्ला त यसपटक ?
हामीले गत निर्वाचनमा ठूलाे मूल्य चुकाएका छाैं । संसारकाे ठूलाे एनअारएन राष्ट्रिय समन्वय समिति भएर एकजना पदाधिकारी पनि नजिताइ रित्ताेहात फर्केका छाैं । यसबाट हामी सबैमा लज्जाबाेध भएकाे छ। र, हामी सबैले ठूलाे पाठ सिकेका छाैं ।
मलार्इ विश्वास छ, यसपटक अमेरिकी एनअारएनकाे प्रतिष्ठाका लागि पनि सबै एक भएर हामी उपाध्यक्ष जितेरै फर्कनेछाैं । याे मेराे मात्र हारजितकाे प्रश्न हैन, याे एनअारएन अमेरिका र अमेरिकामा रहेका हामी सबै एनअारएनकाे इज्जत र प्रतिष्ठाकाे विषय पनि हाे । त्यसैले हामी जात, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग, वाद, राजनीतिक अास्था सबैबाट माथि उठेर एनअारएन अमेरिकाकाे इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि यसपटक जुट्नेछाैं । यही अाशा र विश्वासका साथ मैले अाफ्नाे उम्मेद्वारी दिएकाे हुँ। सबै साथीहरूले पनि यसलार्इ यसरी नै बुझेर अाअाफ्नाे ठाउँबाट याेगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।